Rodhi Digital - ल्होसारमा नानुलाई कालुको प्रेमपत्र
ल्होसारमा नानुलाई कालुको प्रेमपत्र
प्रितम गुरुङ | बिहिवार पुस ९, २०७७ | काठमाडौ ( ~2मिनेट )
अशेष माया अनि अबिरल सम्झना |
अहिलेको समयमा पत्र लेख्नु मुर्खता नै होला तर नेट को जमानामा नेट्को सदुपयोग नभएपछि बाध्य भएर पत्र मार्फत तिमिलाइ सम्झना पुगे - नानू ।
आफ्नो आफ्नो बाटोमा लागेर , नदि को दुई किनारा भै नभेटेको पनि दशकौ भएछ । संवाद नभएतापनी कहि कतै अबिस्मरणिय पलका पोकाहरु फुटे होलान । तिमिमा के भयो थाहा भएन , अनुमान मात्र गरे तर म चाहिँ त्यस्को अपबाद मा परिन । यस्तै रहेछ - जिन्दगी ।
शिशिर ऋतुको आगमन भनेको ल्होसार आयो को संकेत हो । थाहा छ ? आजकाल पहिलाको जस्तो तमु ल्होसार कहिले ,कति गते पर्छ भनेर कसैले नि प्रश्न गर्दैन नि । सबैमा ज्ञान भएको छ - १५ पुस । च्यु ल्हो ( मुसा बर्ग ) को बिदाइ त्यति राम्रो भएन । सन्सारभर कोरोना ले उब्जाएको डर त्रास , अशान्ती , पीडा मा बित्यो । अब ल्वो ल्हो ( गाई बर्ग ) आएपछि त्यस्तो नहोला , नहोस पनि । कोरोनाको कारण ले हाम्रो थेबा चाड मनाउन चाहिँ रोक्दैन । टुडिखेल काठमाडौमा धुलो खादै उबेला मास्क लगएर हिड्ने तिम्रो आचरणलाई अहिले सबैले तिम्रो अनुसरण गर्थोहोला तर बिडम्बना टुडिखेल मा नहुने भएको छ । कारण तिमी बुझ्छौ तर तमु ह्युला छोज धि गुरुङ रास्टृय परिसद ल्होसार मुल आयोजक समिती २०७७ ले रक्तदान , प्रथम तमु आइडल , च्यु ल्हो पुस्तक प्रकाशन - समिछा , छेलो प्रतियोगिता , सास्कृतिक कार्यक्रम , निर्त्य प्रतियोगिता र शुभकामना आदनप्रदान गरेर मनाउदैछ - आफ्नै भबन मित्रनगर मा । सबै भेटिदैन होला टुडिखेलमा झै तर जुम , युट्युब , फेसबुक लाइभ बाट मजाले देख्न सकिन्छ ।
थाहा छ नानु , रोधी अहिले टिम बनाएर वेबसाइट , युट्युब , फेसबुक मार्फत ल्होसार कार्यक्रम लाइभ गर्दैछ । तिमी , जहाभए पनि हेर ल - तमु ल्होसारको रौनकता ,फेरि बिर्सियौ भने ठ्याक्कै १ बर्ष कुर्नुपर्छ नि ।
उ बेलामा खैमो ङ्योला पुस पन्ध्र खैमो ल्होसार , गुरुङ गित खुब चलेको थियो अझैसम्म त्यस्तै छ । बरु एकताको सन्देश लिएर आयो ल्होसार नि थपिएको छ । गित संगीत , मन भुलाउने खेल नै रहेछ तर हाम्रो तमु ल्होसार गित चाहिँ सदाबहार क्या । गुरुङ गित संगीतको श्रोत गुरुङ फिल्म निर्माण ले च्यु ल्होमा थलो नै परेको जस्तो भयो । घोषणा भयो तर फिल्ड मा गएन बरु जिफान ले गुरुङ चलचित्रकर्मीलाई ब्यस्त राख्न ८ वटा सर्ट्मुभी बनाउन लगायो । तमु कलाकार सघ ले कलाकारलाई धेरै थोरै नगद र खाद्य राहत बितरण गर्यो ।
सत्यलाई स्विकार्नु पर्छ । जीवन , अपठ्यारा भोगाइको तितामिठा अनुभव को प्याकेज रहेछ । शायद अब त तिमिले नि बुझिसक्यौ होला । जीवन उतारचढाव मा , बिगत ले बर्तमान भबिस्यको बाटो कोरेको हुन्छ । हिजो नि भनेको आजनी भन्दैछु - कसैले आफुप्रती गरेको गुन नबिर्सनु । नुन र सुन चिन्नु । सदा सकारात्मक शोच राख्नु । मरि लानु के छ र ? जस्तो अएको थियो त्यस्तै जाने हो । ल त धेरै नि भयो होला , अन्तमा - ल्वो ल्होसारै आशिमाला । छ्याब छ्याब तरिगे ।
उहीँ तिम्रो कालू
धेरै पछि खुशीमा फर्किएको - आमा
रमाइलो सास्कृती कार्यक्रम सहित तेस्रो सोल्टी ११ फुटसल टुर्नामेन्ट समापन